ရင်ဘတ် အတွင်းက ကွက်လပ်လေးတစ်ခု (အစ/အဆုံး) – Grab Love Story
ဧည့်ခန်းထဲရှိထင်းမိုးဖိုလေးရှေ့တွင် မီးဖိုကအလင်းရောင်ရယ် နံရံကပ်မီးအ၀ါလေးတွေရဲ့ မစို့မပို့ အလင်းရောင်ထဲ မွေးပွကော်ဇော်ပေါ်ထိုင်ကာ ဆိုဖာကိုမီထားသည့် စိုးတေဇ အမေးကိုဖြေလည်းဖြေသလို ဇင်မိုးသူ အနိမ့်သံလေးဖြင့် ပြန်လည် မေးလိုက်လေသည်…
စိုးတေဇလည်း အသားဖြူဖြူ မှာ နက်ပြာရောင်ဆွယ်တာလေးနဲ့ လိုက်ဖက်လှတဲ့ ဇင်မိုးသူကို မော့ကြည့်နေရင်း… အကြည့်ပြန်လွဲလိုက်ကာ
မှန်စားပွဲပုပေါ်ရှိ စိုးတေဇသောက်လက်စ ၀ိုင်ပုလင်းနှင့် ဖန်ခွက်ကိုကြည့်ပြီးမေးလိုက်ကာ စိုးတေဇမီထားသည့် ဆိုဖာပေါ်တွင် ညှင်သာစွာထိုင်ချလိုက်သည်…ပိန် ပါးသွယ်လျတဲ့ မဇင်ခန္ဓာကိုယ်လေဟာ ဆိုဖာပေါ်ကြွကြွလေးဖြင့် အရုပ်လေးတင်ထားသလို လှပနေသည်… စိုးတေဇလည်း ဇင်မိုးသူကို ခေါင်းငြိမ့်ပြကာ ခါးဆန့်ရင်း ထမင်းစားခန်းက ၀ိုင်ဖန်ခွက် တစ်ခွက်ထယူကာ ၀ိုင်ငှဲ့ပေးပြီး ဇင်မိုးသူကို ပေးလိုက်လေသည်….ဇင်မိုးသူ ဖန်ခွက် တစ်ဝက်စာ ၀ိုင်ကို ဆက်တိုက်တစ်ကျိုက်ထဲ မော့သောက်လိုက်ရာ…မျက်နှာလေးများ သွေးရောင်လွှမ်းတက်သွားလေသည်…ပြီးနောက်…
ဒီနေ့ ကိုမင်း… မဇင်အသံလေးတုန်ဝင်သွားပြီး သူကိုယ်တိုင် ၀ိုင်ထပ်ငှဲ့ကာ ၂ ငုံစာလောက်သောက်ချလိုက်ပြီး ဖန်ခွက်ကိုင်ထားသည့်လက်များ တုန်နေကာ…မျက်ရည်စက်များ ပိုးပိုးပေါက်ပေါက်ကျလာလေသည်…. စိုးတေဇလည်း ဇင်မိုးသူလက်ထဲမှ ၀ိုင်ခွက်ကို အေးစက်နေသည့်လက်ချောင်းရှည်ရှည်လေးတွေကို ဖွဖွလေးဖယ်ကာ ယူလိုက်ပြီး စားပွဲပေါ်တင်ပြီး….
ဟုတ်တယ် ဒီနေ့ကိုမင်းဆုံးတာ ၄ နှစ်ပြည့်တယ်…ကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ် မဇင်ရယ် ကျွန်တော် စိတ်လိုက်မာန်ပါ အိမ်ကထွက်မလာသင့်ဘူး…မဇင်တို့နားမှာနေပေးသင့်ပါတယ်…ကျွန်တော်ထွက်လာရ တယ်ဆိုတာကလည်း…ကျွန်တော်မရှိလည်း မဇင်တို့သားအမိ နေသားကျလောက်ပြီထင်တာရယ်… ကျွန်တော့် နှလုံးသားကို စုတ်တံတွေကြား ထဲပြန်မြုပ်ထားပြီး ကျွန်တော်ကိုယ် ကျွန်တော် ကုစားဖို့အချိန်ယူချင်တာရယ်…နောက်ပြီး ဒီ ၄ နှစ်လုံးအတူနေသလို ဆက်မနေပေမယ့်လည်း အဝေးကနေစောင့်ရှောက်ပေးမယ်ဆိုတာကြောင့်ပါ…ကျွန်တော် မဇင်ကိုလည်း ဖွင့်မပြောဘဲထွက်လာခဲ့မိတာ မဇင်နဲ့ အတူးလေး ၀မ်းနည်းသွားရတယ်ဆိုရင်တောင်းပန်ပါတယ်…
စိုးတေဇ… ဇင်မိုးသူ ကို ၀မ်းနည်းစွာပြောလိုက်လေသည်…သူကိုသူလည်းစိတ်ထဲအပြစ်တင်နေမိလေသည်..
တကယ်တော့ ခုလိုထွက်လာရတာလည်း ကျွန်တော်….မ လုပ် ချင် ဆုံး အလုပ်ပါ မဇင်… စိုးသူရ မဇင်ပေါင်ပေါ် ခေါင်းအပ်ကာ ရင်ထဲကနာကျင်နေပြီး ငိုသံမထွက်မိအောင်ထိမ်းရင်း အရှိုက်ပြင်းပြင်းအသက်ရှုနေသည်….စိုးတေဇသူ့မျက်ရည်တွေကိုတော့ မထိမ်းနိုင်…
ဇင်မိုးသူသည်.. သူ့ချည်သား ဘောင်းဘီပေါ်ကျလာတဲ့ စိုးတေဇ မျက်ရည်ပူတွေကို ခံစားမိလေသည်….
ဇင်မိုးသူ စိုးတေဇ ခေါင်းကိုမော့စေလိုက်ပြီး…ကြည့်ကာပြောလိုက်သည်…
တေဇ နောက် မဇင်နဲ့ အတူးလေးကို ထားခဲ့ပြီးထွက်မသွားပါနဲ့…တေဇသွားချင်တဲ့ဆီရှိရင်လည်း အမတို့ သားအမိကို ခေါ်သွားပါ…ဒါ မဇင်ရင်ထဲပြောတာပါ
လာ ဆိုဖာပေါ်တက် ခွက်ချင်းတိုက်ရအောင်…
စိုးသူရလည်း ရင်ထဲ မွန်းကြပ်သည်များ ခဏတာ ပေါ့သွားသလိုခံစားရပြီး အပျော်လေးများ ရုတ်တရက် ခုန်ပေါက်ဝင်လာသည်ဟု ခံစားမိလေသည်… ၀ိုင်ခွက်တွေထဲ ၀ိုင်ငှဲ့ကာ ဇင်မိုးသူကို တစ်ခွက်ပေးပြီး သူ ကိုယ်တိုင်တစ်ခွက်ကိုင်ကာ..
မခွဲကြေး ဆိုကာ မဇင်ပြောသလိုလိုက်ပြောပြီး ဖန်ခွက်ချင်း တိုက်ကာ မော့သောက်လိုက်ကြလေသည်..
တေဇကို မဇင်မေးစရာရှိတယ်…အမှန်တိုင်းဖြေရမယ်နော် စိုးတေဇ ခေါင်းငြိမ့်ပြရင်း ဇင်မိုးသူ မေးမှာကို စိတ်ဝင်စားစွာနားထောင်လိုက်သည်…
မင်း မဇင်ကို ဘယ်တုန်းထဲက စိတ်ဝင်စားနေတာလည်း
စိုးတေဇ အာစေးများကပ်သွားသည်…တကယ်တော့ဒီမေးခွန်းက သူ့အတွက် အလွယ်ဆုံးမေးခွန်း…သူ ၆ တန်းမတက်ခင် ၊မဇင် သည် ၉တန်းမတက်ခင်ဖြစ်သည့် နွေရာသီ မှာ မဇင်တို့မိသားစု သူတို့ မျက်နှာချင်းဆိုင်အိမ်ကိုပြောင်းလာကြတယ်…အရင်က မဇင်မေမေနဲ့ စိုးတေဇတို့မေမေနှင့် နယ်မှာတစ်ကျောင်းထဲအတူပြီးခဲ့ကြတဲ့ ငယ်သူငယ်ချင်းအရင်းကြီးတွေ…မဇင်တို့ မိသားစု မန္တလေးပြောင်းလာမယ်ဆိုတော့ စိုးတေဇတို့ အမေတိုက်တွန်းမှုကြောင့် ရှေ့ခြံကိုဝယ်ဖြစ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်သည်…မဇင် မေမေနဲ့ မဇင်ရယ် အိမ်တက်ဖိတ်စာလေးလာပေးတဲ့နေ့ သူလှေကားအပေါ်ကနေမဇင်ကိုချောင်းခဲ့တယ် .. ဆံပင်ရှည်လေးကို နောက်လှန်ကာ ဘီးကုတ်ပန်းရောင်လေးကုတ်ထားပြီး ပန်းရောင် တီရှပ်လေးရယ်…အောက်ဖက်က အဖြူရောင် ခြေသလုံးလောက်ထိရှိသည့် စကပ်လား ဂါဝန်ခေါ်မလား ပွပွလေးရယ် ရိုးရိုးလေးနဲ့ သူ့မျက်စိထဲချစ်စရာကောင်းနေသည့် အမတစ်ယောက်…ပြီးတော့ စိုးတေဇရဲ့  အချစ်တော် ကြောင်းဝတုတ် ဖိုးဝါလေး ကို ပေါင်ပေါ်တင်ကာ ပွတ်ပေးနေသည်။ သူ့လိုကြောင်ချစ်တတ်တဲ့ အမ။ ခြံထဲက ဒန်းအဖြူလေးပေါ် ဖိုးဝါလေးကို ချီသွားပြီး စီးကာ ပျော်နေတဲ့ မဇင်ကို အိမ်ပေါ်ထပ်မှန်ပြတင်းကချောင်းနေစဉ် သူ့ရင်ထဲ နွေးထွေးသွားတာလား ရင်ခုန်သွားတာလားမသိ ရုတ်ခြည်းအမည်နာမ တတ်မရအောင်ခံစားမှုအသစ်ခံစားလိုက်ရလေသည်……ဒါတွေ သူ မဇင်ကို စီကာပတ်ကုံးပြောပြလိုက်ချင်သည်…..တကယ်တော့ ဟိုးအရင် သူနှင့် မဇင် လက်မထပ်ခင် ၄ နှစ်မတိုင်ခင် ၈နှစ် ၉ နှစ်လောက်ထဲကပြောပြချင်ခဲ့သည်…ပြောခွင့်မရခဲ့။ သူ့ကိုယ်သူ ထိမ်းသိမ်းထားခဲ့သည်က ပိုမှန်သည်။
ခုမေးလေပြီ…သူဆက်ထိမ်းထားသင့်သလား…ပြောလိုက်သင့်ပြီလား… တွေဝေနေသည်…ရုတ်တရက် မဇင်ကို အသက်ထက်ချစ်သည့် အစ်ကိုဖြစ်သူ ကိုမင်းသူရိန် မျက်နှာကိုလည်း မြင်မိလေသည်….. စိုးတေဇ ၀ိုင်တစ်ကျိုက်သောက်လိုက်ကာ သူ့ခြေထောက်ကိုသူကြည့်ရင်း ဇင်မိုးသူမျက်ဝန်းတွေကို ရှောင်ကာတိတ်ဆိတ် နေလေသည်…ဇင်မိုးသူ… စိုးတေဇ ရဲ့ ခံစားချက်ကို နားလည်သဖြင့်…သူ့ဖက်ကလည်း ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောသင့်ပြီဟုတွေးကာ… စိုးတေဇ လက်ကိုကိုင်ကာ…
တေဇအနေနဲ့ ဖြေရခက်နေရင်…ကိုမင်း နောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်တဲ့နေ့က သူပေးခဲ့တဲ့ စာလေးကိုဖတ်ပြီးမှ တေဇစိတ်ထဲရှိတဲ့အဖြေကိုပေးပါ…မဇင်လည်း ဒီစာဖတ်ပြီးတော့ တေဇ့ဆီလိုက်လာခဲ့တာပဲ...ရော့
ဇင်မိုးသူ ဘောင်းဘီအိတ်ထဲမှ စာအိတ်သေးသေးလေးကို စိုးတေဇ လက်ထဲထည့်ပေးလိုက်သည်…စာအိတ်လေးပေါ်တွင် ဇင်လေး တကယ်လို့ အကိုပြန်မလာလို့ ၃ နှစ်ကြာရင် ဖတ်ဖို့ ဆိုပြီး ရေးထားလေသည်။ ခု ၄နှစ်ရှိပြီ…မဇင် ဒီစာကို ၄ နှစ်ထိစောင့်ပြီးမှဖတ်ခဲ့တာပဲ …ဘာပါလိမ့်
ဇင်လေးဒီစာကိုဖတ်နေပြီဆိုရင် ကိုမင်း ဒီလောကထဲကနေ အပြီးပျောက်ကွယ်သွားလို့ ၃ နှစ်ရှိနေပြီပေါ့။
အရင်ဆုံး ဇင်လေးကို ကိုမင်း အသက်ထက်ပိုချစ်တယ်ဆိုတာယုံပါ။ ဇင်လေးနား တစ်သက်လုံး
နေပေးမယ်ဆိုတဲ့ ကတိ မတည်နိုင်တာကိုတော့ ခွင့်လွှတ်ပေးစေချင်ပါတယ်။ ကိုမင်း မရှိတဲ့နောက် ဇင်လေး
အတွက် ကိုမင်းစိတ်အချရဆုံးနဲ့ ဇင်လေးကို ကိုမင်းလို ချစ်ပေးနိုင်မယ့်သူဆိုလို့ ညီလေး စိုးတေဇပဲရှိမယ်လို့
ကိုမင်း ထင်တယ်။ ဇင်လေး အိမ်ထောင်ပြုမယ်ဆိုရင် စိုးတေဇကိုပဲ ရွေးစေချင်ပါတယ်။ စိုးတေဇ ဇင်လေးကို
စာဆုံးတော့ စိုးတေဇ သက်ပြင်းချကာ ဇင်မိုးသူအမေးကိုဖြေလိုက်လေသည်….ဖြေမယ်ဆိုကာမှ…စကားစဖို့ ခက်နေသည်…နောက်ဆုံးမှာ ရင်ထဲကစကားတွေ ပွင့်ထွက်လာလေသည်…
ကျွန်တော် မဇင်ကို ချစ်နေတာ…မဇင်တို့ အိမ်တက်ဖိတ်စာလာပေးတဲ့နေ့ကထဲကပါ….ကိုမင်း က ကျောင်းဖွင့်ခါနီး ရန်ကုန်ကကြီးတော်တို့အ်ိမ်ကနေပြန်လာတော့ မဇင်ကိုတွေ့ပြီး မဇင်လှကြောင်းနဲ့ သူစိတ်ဝင်စားနေကြောင့် ညတိုင်းအိပ်ခါနီးတိုင်း မရိုးနိုင်အောင် ကျွန်တော့်ကိုပြောခဲ့တယ်…ကိုမင်းကို ကျွန်တော်သနားတယ်…မေမေကဆိုအမြဲပြောတယ်…သူ့သားကြီးဟာတဲ့ ငယ်ငယ်တုန်းက ကံမကောင်းရှာ ဘူးတဲ့ မိဘတွေ စည်းပွားရေးပျက်တာနဲ့ ချိန်ကိုက်ဖြစ်ပြီး…နေထိုင်စားသောက် ချို့တဲ့ခဲ့တယ်တဲ့…ကျောင်းလည်း တစ်နှစ်နားခဲ့ရတယ်တဲ့….ကျွန်တော့်ကိုယ်ဝန်ရလာချိန်မှာ စီးပွားရေးပြန် တက်လာခဲ့ပြီး အဖေက ငါ့သားလေးပေးတာ ငါ့သားလေးပေးတာဆိုပြီး သူ့ရှေ့မှာပြောနေပေမယ့် ကိုမင်းက ပြုံးပြီးအမြဲကြည့်နေခဲ့တဲ့…မနာလိုလည်းမဖြစ်ခဲ့ဘူး ကျွန်တော့်ကိုလည်း စောင့်ရှောက်ပေးခဲ့တယ်…ကျွန်တော် ကိုမင်းကို သူချစ်သလိုအရမ်းချစ်တယ်…ကျွန်တော့်ရင်ထဲ မဇင်ရောက်နေပေမယ့် ကိုမင်းကလည်း မဇင်ကို ရူးမတက်ဖြစ်နေတာမြင်ရတော့ ကျွန်တော် နောက်ထပ် ကောင်မလေးတွေ ခံစားလို့မရတော့မှန်းသေချာသိနေတယ် ဒါပေမယ့် မဇင်ကို ကိုမင်းနဲ့ကြည်ဖြူစွာသဘောတူပေးခဲ့တာပါ…မဇင်တို့ ကိုမင်းတို့ပျော်နေတာမြင်ရင် ကျွန်တော်လိုက်ပျော်နိုင်အောင်ပဲ ကြိုးစားခဲ့တယ်…
စကားအဆုံး.. စိုးတေဇ မီးဖိုထဲ ထင်းချောင်းများထည့်ရင်း နာရီတစ်ချက်ကြည့်လိုက်သည်….. ၀၀း၀၅
ဇင်မိုးသူ အနည်းငယ်ချမ်းသလိုဖြစ်လာတာမို့ လက်မောင်းလေးတွေကို ပွတ်ပြီး ထလာကာ မီးဖို့ရှေ့ထိုင်ချ လိုက်ပြီး လက်ကို မီးလှုံကာ…
ဒါဆို ၆ တန်းကထဲက မင်း မဇင်ကို သဘောကျနေတာပေ့ါ…ဒါကြောင့်လည်း မဇင် ကိုမင်းရဲ့ကိုယ်ဝန်ရှိ နေပြီဆိုတာမင်းသိတာနဲ့ ခိုးပြေးပြီး မဇင်အရှက်ကို မင်းဘ၀နဲ့ လဲပေးဖို့ ၀န်မလေးခဲ့တာပေါ့…ဟုတ်လား..
စိုးတေဇလည်း ဇင်မိုးသူဘေးနား ၀င်ထိုင်လိုက်ကာ…၀ိုင်ခွက်လေးကမ်းပေးလိုက်သည်…သူလည်းမော့လိုက်သည်…
အဲ့တုန်းက အခြေအနေက အရမ်းရှုပ်နေတယ်…ကိုမင်းဆုံးလို့ ၂ လကျော်မှာ မဇင် ကျွန်တော့်ကိုလာပြောတော့ ကျွန်တော်တော်တော် တုန်လှုပ်သွားတယ်…တုန်လှုပ်သွားတယ်ဆိုိတာ မဇင်အနေနဲ့ ကိုမင်းမရှိဘဲ ဘယ်လိုမွေးမလဲဆိုတာပဲ…ရှင်းရှင်းပြောရရင် မဇင်နဲ့ ကိုမင်းတို့ ဆုံဖို့ ကျွန်တော် ပဲ လိုက်ပို့ပေးခဲ့ရတာလေ…အဲ့တော့ ဒီအတူးလေး လူဖြစ်ဖို့က ကျွန်တော်ပါဝင်ပတ်သတ်နေတယ်… ပြီးတော့ ကိုမင်း သွေးကိုမွေးစေချင်တယ်…ဒါပေမယ့် ကိုမင်းက တိုက်ပွဲမှာကျနေချိန် အလောင်းပြန်မရပေမယ့် ဗုန်းထိပြီးမသေရင်တောင် မြစ်ငယ်မြစ်ထဲ ကျလို့ သေဖို့များတယ်ဆိုပြီး တပ်ရင်းက တပ်ရေးဗိုလ်ကြီး ကိုယ်တိုင်အိမ်လာပြောသွားတာဆိုတော့….ကျွန်တော်ခေါင်းထဲရှိတာကတော့ မဇင်ကို ကျွန်တော်ခိုးပြေးမယ်…လက်ထပ်ချင်တယ် ခွင့်တောင်းလည်းမဇင်ခွင့်ပြုမှာမှမဟုတ်တာ…ဒါကြောင့် ကျွန်တော် အဲ့တုန်းက မဇင်ကိုခိုးပြေးခဲ့တာ…ဒါတွေကြောင့်ဆိုပြီးပြောပြဖို့ ဆိုတာကလည်း… မဇင်ရယ်…ပြန်ပြောရင် ကိုမင်းကို အရမ်းသတိရတယ်…ကျွန်တော်ရင်ထဲမကောင်းလို့… အဲ့တုန်းကလည်း မဇင်အပါအ၀င် မိဘ သူငယ်ချင်း အားလုံး ဘယ်လိုပဲထင်ထင်ဂရုမစိုက်ဘဲ စေတနာသန့်သန့်နဲ့ ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တာပါ….အဲ့အတွက်နောင်တမရပါဘူး….ကျန်တာကတော့ ကျွန်တော့်ကံပေါ့…
ဇင်မိုးသူ ရင်ထဲနင့်သွားသည်…ဒီ ၄ နှစ်လုံး သူ့ရင်ထဲကစကားတွေ တခွန်းမှမဟဘဲ ကိုမင်းနဲ့ သူ့သားလေးကိုလည်း တူဆိုတာထက်တောင်ပိုပြီး သားအရင်းလိုသူချစ်ခဲ့တယ်…နာမည်ခံပေးခဲ့တယ်…တကယ်ဆို အရှက်တကွဲဖြစ်ရမှာက သူ..ဒါပေမယ့် သူ့အစား စိုးတေဇက အားလုံးရဲ့ အပြောအဆိုကိုခံကာ ပတ်ဝန်းကျင်အသစ်ဖြစ်တဲ့ ရန်ကုန်ကို မန္တလေးကနေ သူ့ကိုခေါ်ထုတ်ခြဲ့ပီး သူဝါသနာပါတဲ့ ပန်းချီဆွဲတာကို ဆက်မလုပ်ဘဲ သူတို့သားအမိကို လိုလေသေးမရှိစောင့်ရှောက်ထားပေးခဲ့တယ်….သူ့ကိုလည်း အစ်မတစ်ယောက်လို လက်ဖျားနဲ့မတို့ဘဲ စည်း စောင့်ပေးခဲ့တာတွေ အပျော်အပါးအသောက်အစား နဲ့ အပေါင်းအသင်းတွေအတွက် အချိန်လုံးဝအကုန်အမခံဘဲ သူတို့ နဲ့သာ အချိန်ကုန်ပြီး အတူးလေး နေမကောင်းချိန် တစ်ခါတစ်ရံသူနေ မကောင်းချိန်တွေမှာ အနားကမခွာဘဲပြုစုပေးခဲ့တာတွေဟာ တော်ရုံ သံယောဇဉ် မေတ္တာတရားနဲ့ မလုပ် ပေးနိုင်မှန်း ဇင်မိုးသူ ခံစားမိသည်….ငယ်ရွယ်တဲ့၊ မိန်းကလေးတွေ သဘောကျတဲ့ ၊ ၀ါသနာပါတဲ့အလုပ် စတဲ့ အချိန်တွေ၊ ပတ်ဝန်းကျင်တွေ စွန့်ပြီး သူ့တို့ကို စောင့်ရှောက်ဖို့တစ်ခုထဲနဲ့ လဲရဲခဲ့တဲ့ စိုးတေဇကို သူမြင်တိုင်းနေစဉ် သနားသလို သံယောဇဉ်လည်း တွယ်မိလေသည်…သူ ကိုမင်းကို ချစ်သည်….ဒါကြောင့်လည်း ကိုမင်းရှေ့တန်းမထွက်ခင် သူ့ဘ၀ကို ကိုမင်းဆီပေးခဲ့မိသည်။
ကိုမင်း တပ်ရှိရာမြို့ကို စိုးတေဇကားမောင်းပို့ပေးကာ သွားခဲ့ကြပြီး…ဟော်တယ်လေးမှာ နှစ်ဦးသား စကားတွေအလွမ်းတွေ သယ်ရာကလေ မရည်ရွယ်ဘဲ အချစ်တွေဖလှယ်ခဲ့ကြတယ်။ ကွန်ဒုံးမပါပေမယ့် ကိုမင်း အပြင်မှာ ပြီးလိုက်တာကို ယုံကြည်ပြီး ဆေးမသောက်မိခဲ့။ တကယ်တော့ ကိုမင်းစစ်ထဲဝင်တော့ သူတားချင်သည်…ဒါပေမယ့် ရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာပြင်က လူနာတွေနယ်ခြားက တောသူတောင်သားတွေ အတွက် ရန်သူ မိတ်ဆွေမခွဲခြားဘဲ ငွေကြေးကြောင့်မဟုတ် အာဏာကြောင့်မဟုတ် သူဆေးကုပေးချင်တယ်ဆိုပြီး သူ့ဟီးရိုး Hacksaw Ridge လိုဆိုကာ စစ်ဆေးထဲ ၀င်သွားခဲ့သည်….
စာချုပ်အတိုင်း စစ်သက် ၁၀ နှစ်ပြည့်ရင်တော့ တပ်ကထွက်ပြီး သူနဲ့ အတူတူ နေကြမယ်ဆိုတဲ့ကတိစကားလေးရယ်… သူ့ရဲ့လေးစားဖွယ်စိတ်ဓါတ်ကို သူမတားချင်တော့ ဖြစ်လာသမျှကံတရားလို့သာသူမှတ်ခဲ့သည်…ကံက သူနဲ့ ကိုမင်းကိုခွဲလိုက်လေပြီ….ခုသူဘာဆက်လုပ်သင့် သလဲ သားလေး အတူးကလည်း စိုးတေဇကို အဖေရင်းလိုချစ်နေတယ်…အဖေလိုပဲထင်နေတယ်… အားလုံးကလည်း မင်းတူးတူးအဖေသည် စိုးတေဇလို့ပဲ သိထားကြသည်….စိုးတေဇကလည်း သူနဲ့သားလေးကိုချစ်နေတယ်ဆိုတာ ခံစားမိတယ်…ထိုအချိန် စိုးတေဇက သူ့ကို စိတ်တွေအနည်ထိုင်လောက်ပြီဆိုကာ သူ့ကိုမြင်ရင် ကိုမင်းကို သတိရစိတ်ပိုခံစားရမယ်ဆိုပြီး….အိမ်ကထွက်သွားတော့ သူ့ရင်ထဲ ရုတ်တရက် သူ့ကမ္ဘာလေးပြိုကွဲသွားသလိုခံစားရပြီး ဒီနှစ်တွေ ကိုမင်းအစား စိုးတေဇကိုအားကိုးရင်းအားကိုးရင်းနဲ့ ရင်ထဲမှာငြိတွယ်မိလာသည်ကို သိသိသာသာခံစားမိသွားသည်….
တေဇ မင်း မဇင်ကိုချစ်တယ်ဆိုတာ ဘာနဲ့သက်သေပြမလဲ
ဇင်မိုးသူ သူ့ကိုသနားလို့ ဒါမှမဟုတ် သူ့အကိုစကားနားထောင်ပြီး လက်ခံလိုက်တာမျိုးတော့ မလိုချင်…သူဖက်ကဆုံးဖြတ်ထားတာရှိသည်…သူ စိုးတေဇရဲ့ ချစ်မေတ္တာတွေကို အသိအမှတ်ပြုပေးချင်မိသည်။ သူ့အချစ်တွေကို ပိတ်လှောင်ထားတာကနေ တံခါးဖွင့်ပေးလိုက်ပြီး သူရယ် စိုးတေဇရယ် သားလေး မင်းတူးတူးရယ် ၃ ယောက်သား တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ဘာနံရံမှခြားမထားဘဲ လက်ကျန်ဘ၀လေးမှာ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေကြမယ်လို့ တစ်လမ်းလုံးတွေးလာမိသည်။ ဒါပေမယ့် စိုးတေဇ သူ့ကို ချစ်တယ်ဆိုတာ သေချာဖို့တော့ သူ့အတွက်အရေးကြီးသည်…မသေချာလျှင် စိုးတေဇ ဘ၀အတွက် သူ ပြန်ကြည့်ပေးသင့်ပြီ…စိုးတေဇ ပြမယ့် သက်သေကိုသူစောင့်နေလိုက်သည်….
မဇင်ခဏစောင့် ဆိုကာ အိမ်ပေါ်တက်သွားလေသည်….ဒီပြင်ဦးလွင်ကအိမ်လေးသည်…ကိုမင်းတို့ မိဘတွေရဲ့အိမ်ဖြစ်ပြီး ကိုမင်းရန်ကုန်စစ်ဆေးကဆင်းပြီး ပြင်ဦးလွင် မှာသင်တန်းတက်ချိန်တွေ မှာ မိသားစုတွေလာတွေ့ဖို့နဲ့ ကိုမင်း နားဖို့ ၀ယ်ထားတဲ့အိမ်ဖြစ်သည်။ စိုးတေဇရဲ့ ပန်ချီးခန်းလေးလည်းရှိလေသည်။…..
စိုးတေဇ ပြန်ဆင်းလာတော့ လက်ထဲ ပုံဆွဲ စာအုပ်ခပ်ကြီးကြီးပြားပြား တစ်အုပ်ပါလာသည်….ဇင်မိုးသူကို လှမ်းပေးလိုက်လေသည်…
ဇင်မိုးသူ ပထမဆုံးစာမျက်နှာဖွင့်လိုက်ရာ…ခဲပန်းချီဖြင့် ဘီးကုတ်လေးနဲ့ကောင်မလေးတစ်ယေက် ဒါန်းလေးပေါ်မှာ ကြောင်ဝတုတ်လေး ပေါင်ပေါ်တင်ပြီး ပြုံးပြီးထိုင်နေတဲ့ ပုံလေးကိုတွေ့လေသည်….
ပန်ချီကာလေးထောင့်မှာ ကျွန်တော်ရဲ့ချစ်သူ…ဆိုပြီး ရက်စွဲလေးနှင့် ရိုးရိုးလေး ရေးထားလေသည်….
ဇင်မိုးသူ ရင်ထဲလှိုက်ခနဲဖြစ်သွားလေသည်….ဒါသူ့ပုံ အဲ့အချိန်ထဲက သူ့ကိုချစ်နေခဲ့တာလား စိုးတေဇရယ်…မင်းမျိုသိပ်ထားရတာဘယ်လောက်တောင် များပြီလဲ ကြာနေပြီလဲကွယ်….
ဇင်မိုးသူ စာအုပ်လေးကို ဘေးကိုချကာ စိုးတေဇကို လှမ်းဖက်လိုက်လေသည်…..ပြီးနောက် စိုးတေဇ မျက်နှာကိုကြည့်ကာ….
တေဇ မင်း မဇင်ကို စကားတစ်ခွန်းပြောပါလို့ပြောရင် ခုချိန် မင်းဘာပြောမလဲ…ဟင်
စိုးတေဇ ဇင်မိုးသူမျက်လုံးတွေထဲက မျက်ရည်ကြည်လေးတွေ ကိုမြင်ရချိန်…သူ့ရင်ထဲ …အနှစ်နှစ်အလလ သူစောင့်ထိမ်းခဲ့တဲ့ စကားတစ်ခွန်း အတွက် အတားအဆီးတွေ အရည်တွေပျော်ကျ ကုန်ပြီ….
ကျွန်တော်လေ…မ ဇင် ကို….ချစ်တယ်….ဟိုးအရင်ထဲကရော…အခုရော…နောက်ရော…ချစ်နေဦးမှာပါ
မဇင်မျက်ရည်များ ကျလေပြီ…စိုးတေဇ လက်မလေးနှစ်ဖက်နဲ့ ပါးပြင်ပေါ် စီးကျသမျှ မျက်ရည်တွေကို သုတ်ပေးလေသည်….မဇင်ရဲ့ ရှိုက်ကြိးတငင်ငိုနေတာကြောင့် တသိမ့်သိမ့်တုန်ရီနေတဲ့ မဇင် ကိုယ်လုံးသေးသေးလေးကို သူ့ရင်ခွင်ထဲထွေးပွေ့ထားလိုက်လေသည်….မဇင် နဖူးလေးကို သူနမ်းချလိုက်သည်….မဇင်မျက်နှာလေးမော့လာပြီး တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် မျက်လုံးချင်းစိုက်ကြည့်နေရင်း စိုးတေဇ ခေါင်းလေး ငုံဆင်းလာသည်ကို မြင်တော့ ဇင်မိုးသူ မျက်လုံးလေးမိတ်ပြီး ငြိမ်နေလိုက်သည်….စိုးတေဇ နှုတ်ခမ်းတွေ သူ့နှုတ်ခမ်းတွေကို လာထိတော့ သူ့ရင်ထဲ ခုန်တက်သွားလေသည်….အချစ်တွေအပြည့်နဲ့ အနမ်းတွေ ဒီနှစ်တွေမှာ သူလည်း တောင်းတနေခဲ့တာပါ…ကိုမင်းလည်း သူ့ကိုခွင့်လွှတ်မှာပါ…သူ့အတွေးပေါင်းများစွာကြောင့် နှုတ်ခမ်းတွေ တင်းတင်းစိထားမိလေသည်…..စိုးတေဇလည်း ဇင်မိုးသူ စိတ်ဆိုးသွားပြီထင်ကာ နှုတ်ခမ်းခြင်းခွာပြီး ဇင်မိုးသူကို ကြည့်လိုက်သည်….ဇင်မိုးသူမျက်လုံးလေးပွင့်လာပြီး…စိုးတေဇကို ဖြေးဖြေးလေးတွန်းလှဲလိုက်ပြီး စိုးတေဇအပေါ် သူ့ ကိုယ်လုံးလေးထပ်ကာ အပေါ်ကနေ ငုံပြီး စိုးတေဇ နှုတ်ခမ်းတွေကို နမ်းလိုက်လေသည်…
၀ိုင်ကြောင့်စိတ်လှည့်စားနေခြင်းမဟုတ်သည်မှာ ဇင်မိုးသူသေချာသည် သူ့ရင်ခုန်သံရော စိုးတေဇရင်ခုန်သံရော နှုတ်ခမ်းချင်းနမ်းနေစဉ် ကြားနေမိသည်…စိုးတေဇ ဇင်မိုးသူကို ဖက်ထားရင်း ထထိုင်လိုက်သည်….ဇင်မိုးသူ ဖားလေးလိုကပ်လျှက်လေး စိုးတေဇ ကိုယ်မှာကပ်နေသည်…အနမ်းတွေက တော့လုံးဝမလွှတ်နိုင်ကြပေ…စိုးတေဇ ဇင်မိုးသူ ကိုယ်လုံးပေါ့ပေါ့လေးကို ပင့်သွားပြီး ဆိုဖာပေါ် တင်ပေးလိုက်လေသည်…ထို့နောက် အချစ်နဲ့ဝိုင် ညီမျှစွာပေါင်းစပ်ထားတဲ့ မဇင်ရဲ့ ရီဝေေ၀ မျက်လုံး ၀ိုင်းဝိုင်းလေးနှင့် ကြည့်ရင် ဟိုး ငယ်စဉ်ထဲက သူ့ချစ်နေတဲ့ မဇင်ဟာ ခုချိန်ထိ သူ့မျက်စိထဲမယ် ချစ်စရာကောင်းနေဆဲပေ…သူ့အရမ်းနမ်းချင်ခဲ့တဲ့ မဇင်ရဲ့ နှုတ်ခမ်းပါးလေးတွေဟာ သူ့အတွက် အဆင်သင့်ဖြစ်နေခဲ့ပြီ…သူဘယ်ကဘယ်လို စပြီး မဇင်ကိုချစ်ရမယ်မသိဖြစ်နေသည်….သူ့ဘ၀မှာ ဒါဟာ ပထမဆုံးအကြိမ်…သူမဇင်ဆံပင်တွေထဲ သူ့နှာခေါင်းကို သွင်းလိုက်ပြီး တ၀ကြီးနမ်းရှုံလိုက်သည်…နောက်တော့ မဇင်နားရွက်နုနုလေး…မဇင် လည်တိုင်လေးဆီရောက်တော့ မဇင်ရင်ဘက်လေးကော့သွားပြီး စိုးတေဇ ခါးလေးနှစ်ဖက်က ဆွယ်တာ စကို ဆွဲလိုက်လေသည်….မဇင်ရဲ့ ကိုယ်သင်းနံ့လေးတွေက သူ့ကိုပိုချစ်လာစေသည်…မဟုတ်ဘူး….သူ့ကို ရူးနှမ်းသွားစေသည်….နမ်းနေရင်း ချစ်လိုက်တာမဇင်ရယ်…မဇင်လည်တိုင်လေးကနေ မဇင်ရင်ဘက်လေးဆီ ဆွယ်တာ လည်ပင်းဟိုက်လေးကို ဆွဲပြီး စုပ်လိုက်သည်….သူဆွယ်တာကိုမချွတ်ရက်….မချွတ်ရဲတာပိုမှန်သည်….
ဇင်မိုးသူလည်း စိုးတေဇ ဆွယ်တာဆွဲချွတ်လိုက်လျှင်လည်း သူချွတ်ပေးမည်ဖြစ်သည်…ဒါပေမယ့် သူရှက်သည်….မချွတ်ပါစေနဲ့လို့လည်း ကြိတ်ဆုတောင်းနေမိသည်…နောက်အခါတွေတော့ သူအသင့်ဖြစ်ချင်ဖြစ်နေမည်…ဒီတစ်ခေါက်တော့ သူအသင့်မဖြစ်သလိုခံစားရလေသည်….စိုးတေဇ ဘယ်ဆက်နမ်းရမှန်းမသိတော့ မဇင်ရဲ့ အောက်နှုတ်ခမ်းလေးကို တစ်ခါပြန်လာနမ်းလေသည်…မဇင်ရဲ့ နှာခေါင်းက လေနွေးလေးတွေဟာ စိုးတေဇအတွက် ဆန်းသစ်နေပြီး တက်မတ်မိစွာ နှုတ်ခမ်လေးအားစုပ်ယူရင်း ရှုရှိုက်နေမိသည်….ထို့နောက် ကိုယ်လုံးချင်ခွာလိုက်ကြပြီး…
တေဇ…မဇင် မင်းအတွက် အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီ…မဇင် မင်းကိုလည်း ချစ်နေမိပါပြီ…
ဇင်မိုးသူ ဖြေညင်းတိုးတိတ်စွာ စိုးတေဇကို ပြောလိုက်လေပြီး ခေါင်းလေး ဆိုဖာကျောမီဖက်ကို စောင်းနေလိုက်သည်…စိုးတေဇလည်း သူ့ဘောင်းဘီရှည်ကို ချွတ်လိုက်လေသည်… ထို့နောက်…. ဇင်မိုးသူဆွယ်တာလေးကို ဗိုက်လေးနားအနည်းငယ်လှန်လိုက်ကာ…. ဗိုက်သားချပ်ချပ်လေးကို နမ်းစုပ်လိုက်လေသည်….ထို့နောက် အတူးလေး ကိုမွေးတုန်းက ခွဲထားသည့် ချုပ်ရိုးနေရာလေးကို တစ်ချက်နမ်းလိုက်ပြီး…. ဇင်မိုးသူ့ ဘောင်းဘီရှည်လေးကို အောက်ကို ဖြေးဖြေးချင်းဆွဲချလိုက်သည်…ဇင်မိုးသူလည်း ဖင်လေးကြွပေးပြီး ဆိုဖာလေးဘေးမှာ ဒူးထောက်လျက်အလုပ်ရှုပ်နေသည့် စိုးတေဇကို ကြည့်ရင်း…ရင်ခုန်နေသည်…..ဘောင်းဘီရှည်ကျွတ်သွားတော့ ကျန်ခဲ့သည့်…အတွင်းခံလေးကို မြင်တော့….တစ်သက်မှာတစ်ခါမှ မလုပ်ဖူးတာ ကို စိုးတေဇလုပ်မိလိုက်သည်…အတွင်းခံလေးပေါ်ကနေ နမ်းလိုက်လေသည်….ပြီးနောက် အတွင်းခံလေးကို ဆွဲချွတ်လိုက်ချိန် ဆီးစပ်ကအမွှေးကပ်ကပ်လေးတွေမြင်တော့ စိုးတေဇ အာခေါင်ထဲ ခြောက်ကပ်သွားလေသည်…ဇင်မိုးသူလည်း မျက်နှာကို တစ်ဖက်လွှဲထားပြီး လက်က ယောက်ပြီး ဆိုဖာကို တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ကိုင်ထားမိလေသည်….
စိုးတေဇတစ်ယောက် ဒီအရွယ်ထိ ဘယ်မိန်းမနဲ့မှ မနေဖူးသူမို့….ကြားသာကြားဖူးပေမယ့် ဒီလိုနေရာနမ်းရှုံကြသည်ကို သူအံ့သြဖူးသည်….ခုချိန်မှာတော့ သူနားလည်လိုက်သည်….ချစ်ရင် ဘာကိုမဆို ချစ်မိသွားတာပဲလို့ သိလိုက်သည့်အပြင် ငုံထားမတတ်ချစ်တယ် ဆိုတဲ့ စကားကြီး ဘယ်ကနေဘယ်လိုရောက်လာတယ်မသိ…ငုံထားမတတ်ဆိုတာအတွေးထဲလည်နေကာ…နောက်ဆုံး သူငုံ့ကာ မဇင်ရဲ့ အမွှေးလေးတွေနဲ့ ဆီးစပ်နေရာအနှံ့ကို နှုတ်ခမ်းလေးနဲ့ လိုက်ဖိလိုက်လေသည်… ဇင်မိုးသူလည်း ရင်ခေါင်းထဲက ယားကျိကျိနှင့် တွန့်လိမ်ကာ ပေါင်ကိုစိကာထားလေသည်…..
နာလို့လား မဇင် ဇင်မိုးသူတွန့်လိမ်ကာ ပေါင်စိထားသည်ကိုကြည့်ပြီးစိုးရိမ်းကာ မေးလိုက်သည်…
ဇင်မိုးသူလည်း ရုတ်တရက်ကြောင်သွားကာ သူအကြောက်လွန်နေပုံကို ပြန်မြင်ပြီး…စိုးတေဇစိုးရိမ်နေသည့်မျက်နှာကြီးကြောင့်လည်း ရီချင်သွားသည်…
မဟုတ်ပါဘူး တေဇရယ် နှုတ်ခမ်းနဲ့ လိုက်နမ်းနေတာ ဘယ်လိုနာမှာလဲ ကြောက်လို့
စိတ်မကောင်းမဖြစ်ပါနဲ့ မဇင်နားလည်ပါတယ်…တေဇက လူပျိုလေးပဲကိုး….မဇင်ကိုလည်း နားလည်ပေးပါ…..ဘ၀မှာ ခုချိန်ထိ ဒါ မဇင်အတွက် ဒုတိယအကြိမ်ဆိုတာကို….
စိုးတေဇ စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားသည်…ဒုတိယအကြိမ်ဆိုပေမယ့်….မဇင်အဖို့ ပထမအကြိမ်နဲ့ ဘာမှကွာမည်မထင်… မဖြစ်ဘူး ငါယောက်ကျားလေးပဲ မဇင်ကိုငါကပဲ ဦးဆောင်မှဖြစ်မယ်…
ကျွန်တော်စိတ်လှုပ်ရှားနေလို့ပါ… ငယ်ငယ်တုန်း မဇင်ကို ကျွန်တော့်စိတ်ထဲကနေ ချစ်ကြည့်ဖူးပါတယ်.. အဲ့အတိုင်း ပြန်တွေးပြီး ချစ်ကြည့်မယ်နော်…..
မဇင် ပေါင်ကြားလေးထဲ သူဝင်ကာ သူ့လီးကို တေ့လိုက်သည်…မဇင်တစ်ချက်တွန့်သွားသည်…မျက်လုံးမှိတ်ကာ အံကြိတ်ထားလေသည်….ထိပ်လေးနဲ့ အထပ်အောက်ပွတ်ပေးနေတော့ အရည်လေးတွေ စိမ့်လာတာတွေ့တော့…မဇင်ပြီးသွားပြီထင်လိုက်သည်….မဖြစ်နိုင် သူအပြာစာအုပ် ဖတ်ဖူးသည်….ဒါ အစဦးထွက်တဲ့ သဘာဝချောဆီပဲဖြစ်မည်…ဖြေးဖြေးချင်း သွင်းလိုက်လေသည်…အရည်လေးတွေ စိမ့်စိမ့်ထွက်လာတာကြောင့်သာ အဆင်ပြောသွားသည်….သို့သော် မဇင်ထဲကို သွင်းရသည်မှာ ကြပ်ထုတ်လေသည်….စိုးတေဇ တ၀က်လောက်သွင်းပြီးတော့ သူခါးလေးကို လှုပ်ကြည့်သည်….ဇင်မိုးသူ အံကိုက်ရင်း သူ့ကိုစိုက်ကြည့်နေသည် ပြီးတော့ ခေါင်းလေးညိမ့်ညိမ့်ပြလေသည်….စိုးတေဇလည်း ဆက်လုပ်ဖို့ ပြောတာလို့နားလည်လိုက်ပြီး ပြန်ထုတ်ပြန်ထည့်ရင်းနဲ့ ဇင်မိုးသူ ဆီးစပ်နှင့် သူ့ဆီးစပ်တို့ ထိဆက်သွားလေသည်…ဇင်မိုးသူရဲ့ ပေါင် နှစ်ဖက်မှာလည်း ဘေးကို ခြေလေးကွေးကာ ကားထားလေပြီ… ဇင်မိုးသူ ပေါင်ကြားထဲ စိုးတေဇ ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် ရောက်ရှိနေပြီလေ….
ဇင်မိုးသူ စိုးတေဇဆွယ်တာကို လှန်ချွတ်လိုက်လေသည်….စိုးတေဇလည်း အလိုက်သင့် ချွတ်လိုက်ပြီး ဆိုဖာပေါ်လက်ပြန်ထောက်က အသွင်းအထုတ်ကို ကောင်းကောင်းလုပ်နေပြီဖြစ်သည်….သွင်းလိုက်တိုင်း သူ့လီးတစ်ချောက်လုံး တင်းကြပ်ပြီး ဖြစ်ညှစ် စုပ်ယူ တာခံစားရပီး ပြန်ထုတ်လိုက်တိုင်း ဒစ်နဲ့ ညိထိသွားတဲ့ အတွင်းသာအဖုအထစ်တွေရဲ့အရသာကြောင့် လူလည်း ဒူးတွေချောင်ကာ မျော့လာလေသည်။
ဇင်မိုးသူစိတ်ထဲ မင်းသူရိန်ကို သတိသွားသည်…စိုးတေဇဘာလို့ အင်နဲ့အားနဲ့ မဆောင့်တာပါလိမ့်…ကိုမင်းနဲ့ ပထမအကြိမ်တုန်းက ကိုမင်း ဆောင့်ချက်တွေက နောက်နေ့ထိအောင့်နေသည်….ငါက အပျိုမဟုတ်တော့ စိုးတေဇ စိတ်မပါတာလား….ငါ့ဟာများချောင်နေလို့လား သူဘာဖြစ်နေတာပါလိမ့်….
တေဇ မဇင်ဟိုဟာကလေ ချောင်နေပြီလားဟင်…မဇင်က အပျိုမဟုတ်တော့…မင်းစိတ်ထဲ အားမရဘူးထင်….
စိုးတေဇ မဇင် နှုတ်ခမ်းလေးကို လက်ညှိုလေးနဲ့ ပိတ်လိုက်ပြီး….
မဇင် ကျွန်တော်က မဇင် နာမှာစိုးလို့….စသွင်းသွင်းချင်းတုန်းက မဇင် အံကြိတ်နေတာတွေ့တော့…အရမ်းမလုပ်ရဲတာ…ကျွန်တော် အရမ်းကောင်းနေတယ်….ပြီးတော့ မဇင်ဟာလေးက အရမ်းကြပ်နေတယ်…ကျွန်တော့် အရည်တွေထွက်တော့မယ်ထင်တယ်….မဇင်စိတ်ပျက်မှာကိုတောင် စိုးရိမ်နေတာပါ…
ဇင်မိုးသူ သဘောပေါက်သွားလေပြီ…အော် စိုးတေဇရယ် ရိုးပါလား…
တေဇ အမတို့ နှစ်ယောက်လုံးကောင်းနေကြတယ်….မင်းစိတ်ထဲရှိသလို ချစ်ပါ…အမ ခံနိုင်မှာပါ…မင်းပြီးချင်ရင်ပြီးချလိုက်…အမလည်း ပြီးမယ်ထင်ပါတယ်…တို့နှစ်ယောက်ရဲ့ ပထမအကြိမ်ပဲ….အမနားလည်ပါတယ်….စိတ်မပူနဲ့ နောက်ထပ်နေ့သစ်တွေရှိသေးတယ်နော်….
ဇင်မိုးသူ့စကားကြောင့် စိုးတေဇ ပေါ့ပါးသွားကာ…လက်ရှိအတိုင်း တင်းကြပ်နေသည့် ဇင်မိုးသူ အထဲကို အားထည့်ကာ ထိုးသွင်းကာ ခပ်ပြင်းပြင်း ဆင့်ကာဆောင့်လိုက်သည်….ဇင်မိုးသူလည်း ပြန်ပင့်ကာခံပေးနေတာမို့…ဆောင့်သူ စိုးတေဇတစ်ယောက် အားပိုရှိလာလေသည်….
ဇင်မိုးသူဂုတ်လေးကို သိုင်းဖက်ကာ ကိုယ်ချင်းထပ်ပြီး ဆက်တိုက် ဖိသွင်းဖိသွင်းရင်းနဲ့ နှစ်ယောက်သား ပြိုင်သူ မောဟိုက်သံများ ကျယ်လာကြပြီး စိုးတေဇ သုတ်ရည်များ ဇင်မိုးသူ အတွင်းကို ဖိကပ်ပြီး ပန်းထုတ်လိုက်လေသည်…..ဇင်မိုးသူလည်း ရင်ထဲ တစ်မျိုးကြီးနဲ့ အမြင့်ကနေ ပြုတ်ကျသွားသလိုရင် အေးစက်သွားသလိုခံစားလိုက်ရသည်…ပြီးသွားတာလား…ကောင်းတာပဲလား…သူမသေချာ..ဒါပေမယ့် သူအဲ့ခံစားချက်ကို ကြိုက်နှစ်သက်မိလေသည်…သို့သော် လောလောဆယ် သူတော်တော် နုံးကျသွားသလိုလည်းခံစားလိုက်ရသည်….
ဒါကြောင့်ဇင်မိုးသူလည်း စိုးတေဇ ကျောပြင်ကို ပြန်ဖက်ကာ ခန္ဓာကိုယ် နှစ်ခု တေ်ာတော်လေးကြာအောင် ကပ်ထားကြလေသည်…. နောက်မှ စိုးတေဇ သည်…ဇင်မိုးသူ ကိုယ်လုံးလေးကို အိပ်ခန်းထဲပွေ့ချီသွားလေသည်။
ကျွန်တော်ဘယ်ရောက်နေတာလဲ ကျွန်တော့် သေနတ်ရော….မင်းသူရိန်ရုတ်တရက်ထထိုင်ကာ ဘေးမှာ သေနတ်ရှိသည်အထင်နှင့် စမ်းလိုက်လေသည်…ခေါင်းထဲမှ မိုက်ခနဲဖြစ်ပြီး ပြန်လဲကျသွားလေသည်။
တဲလေးထဲမှ မောင်သက်ပြင်းအား ဘေးပတ်ပတ်လည်မှ လူများ ၀ိုင်းကြည့်နေကြလေသည်…ထိုထဲမှ အသက် ၂၂ နှစ်အရွယ် ကောင်မလေးတစ်ယောက် ပြတင်းပေါက်နားထသွားကာ ပါးစပ်ကို လက်ဝါးဖြင့်ပိတ်ကား ငိုရှိုက်နေသည်… ကျန်လူများသည် စိုင်းကံဖ လို့ခေါ်သည့် လူကြီးတစ်ဦးကို ၀ိုင်းကြည့်လေသည်….
ရွာလူကြီး ဦးစိုင်းကံဖလည်း သက်ပြင်းပူကြီးသာ ချကာ တစ်နေ့ ဖြစ်လာမယ်ထင်ပေမယ့် ခုလောက်မြန်မယ်မထင်ထားပေ…..
တကယ်တော့ မောင်သက်ပြင်းသည် မင်းသူရိန်ဖြစ်လေသည်…မောင်သက်ပြင်းမှာ… နမ့်စလပ်ရွာလေးမှ ရွာသားတွေ ပေးထားသည့်နာမည်ဖြစ်သည်…..ဒီနာမည်ရလာပုံကလည်း လွန်ခဲ့တဲ့ ၅နှစ်က မြစ်ငယ်မြစ်ထဲကနေမျောလာတဲ့ သူု့ကို ခေါင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ နမ့်စလပ်ဆိုတဲ့ တောင်ခြေရွာလေးက နမ်းလောဝ်ခမ်းတို့ရွာသူတွေ ရေခပ်ရင်းတွေ့ပြီး ရွာသားတွေ ၀ိုင်းပြီးဆယ်ထားကာ ရှင်လို့ရှင်ငြား….ရိုးရာဆေးဝါးများနဲ့ ကုသထားပြီး သတိပြန်လည်လာတော့ အတိတ်မေ့နေတာကလွဲပြီး လူကောင်းလို့ နေထိုင်လုပ်ကိုင်ကာ….ရွာထဲ စာသင် ဆေးကု တံတားဆောက် အိမ်ပြင် အကုန်ဦးဆောင်၊ ၀ိုင်းလုပ်ရင်း ရွာသားလုံးလုံးဖြစ်နေသည်….လွန်ခဲ့တဲ့ ခြောက်လကမှ မောင်သက်ပြင်းနှင့် နမ်းလောဝ်ခမ်း တို့ နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ချစ်ကြိုက်သဖြင့် ရွာကလူတွေက လက်ထပ်ပေးခဲ့ကြလေသည်…. ထို့နှင့် လွန်ခဲ့သည့် ၂ ရက်က ကိုယ်ဝန်နှင့် နမ်းလောဝ်ခမ်းအတွက် အိမ်သာသွားရအဆင်ပြေအောင် အိမ်နှင့်ကပ်အောင် ပြန်ပြင်ဆောက်ရင်း ပြုတ်ကျကာ ခေါင်းကွဲပြီး မေ့မြော နေကာ ယနေ့မှ ပြန်သတိရလာသည်….သတိရလာတော့ နမ့်စလပ်ရွာသား မောင်သက်ပြင်း ဘ၀ကို မေ့သွားလေပြီ……
ဦးစိုင်းကံဖ စကားဆုံးတော့ သူရူးချင်သွားသည်…. ၅နှစ် တောင်ရှိနေပြီ…..ခေါင်းထဲ မိဘတွ ရှိကြသေးရဲ့လား….သူ့ရဲဘော်ရဲဖက်တွေ ခြုံခိုတိုက်ခံရလို့ သေကြေတာတွေ…ဇင်လေး…ချစ်သူ….သူ…ဇင်လေးကို ပေးခဲ့တဲ့ စာ….. ဟာ….
အား………….. သူတကယ်သေသွားခဲ့ရင်ကောင်းမှာပဲ…..ဆိုပြီး အာခေါင်ခြစ်ကာ အိမ်ပြင်ထွက်ကာအော်လိုက်လေသည်……
မန္တလေး – ရန်ကုန် ရထားပေါ်တွင်း မင်းသူရိန်တစ်ယောက် သူ့ဘ၀အကြောင်းပြန်တွေးရင်း မန္တလေးမှာ သူ့အိမ်ကိုမပြန်ဘဲ ရန်ကုန်ရောက်နေတဲ့ သူ့ညီနဲ့ သူ့ချစ်သူ လင်မယား အိမ်လိပ်စာလေး စုံစမ်းခဲ့ပြီး အစုန်ဆင်းလာခဲ့လေသည်….
လိပ်စာထဲက လမ်းထဲ ၀င်လာခဲ့ပြီး…..ခြံအမှတ်ကိုတွေ့တော့ ခမ်းလှမ်းလှမ်းကနေ ခြံထဲ စည်းရိုးသံတိုင်များကြားမှ အကဲခတ်လိုက်လေသည်…. ၄နှစ်အရွယ် ခလေးလေးတစ်ယောက် သေနတ်တစ်လက်နဲ့ ဖေဖေ ဒိုင်းဒိုင်းဆိုပြီး လိုက်ပစ်နေသည်…ဖေဖေဆိုသူမှာ စိုးတေဇ ဖြစ်နေပြီး… သူတို့ဆော့နေပုံကို ဘေးကနေ မပေါ့မပါးကြီးဖြင့် ကြည့်ကာရီမောနေသည့် အမျိုးသမီးမြင်တော့…
ဇင်လေး…. ရုတ်တရက် ပြေးထွက်သွားမိပြီးမှ သူ့ကိုယ်သူပြန်သတိထားလိုက်သည်…မင်းသူရိန် ရင်ခေါင်းထဲက နာကျင်စွာ ငိုမိနေသည်….. ခဏကြာတော့မှ သူ့စိတ်သူထိမ်းကာ ငါသိပ်ချစ်ရတဲ့ ငါ့ညီနဲ့ ငါ့အသက်ထက်ချစ်ရတဲ့ ချစ်သူတို့ ပျော်ရွှင်နေကြပြီပဲ….ဒါကလည်း ငါဖြစ်စေချင်ခဲ့တဲ့ ဆန္ဒ တစ်ခုပါပဲလေ…ငါကံပဲ….မင်းတို့အတွက် ငါဝမ်းသာပါတယ်…..ရင်ထဲမယ် စကားများ တစ်ယောက်ထဲပြောရင် မျက်ရည်များ တလိမ့်လိမ့်ကျလာသည်။
မင်းသူရိန် ခြေစုံရပ်ကာ တစ်ချက်တွေးလိုက်သည်….အင်း..ငါဘာလုပ်သင့်လည်း….သူဖြစ်ရပ်တွေအစအဆုံးပြန် သုံးသပ်လိုက်သည်.. နောက်ဆုံးမှာတော့ သူဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကို နာကျင်စွာချလိုက်ပေမယ့်….ဒါသူ့အလုပ်သင့်ဆုံး လုပ်ရပ်လို့လည်း သူသေချာသိသည်….ငါ့ကိုမျှော်နေမယ့်…လိုအပ်နေတဲ့ သူတစ်ယောက်ရှိတယ်…ဘ၀ဆိုတာ ပြည့်စုံနေတဲ့နေရာထက် လိုအပ်နေတဲ့ နေရာကို ကွက်လပ်ဖြည့်တာ ကောင်းပါတယ်လေ…. ဟု ဆုံးဖြတ်ချက် ပြက်ပြက်သားသား ချကာ ခြံနားမှထွက်လာခဲ့လိုက်လေသည်။
မြေနီလမ်းလေးရဲ့ မျက်လုံးတစ်ဆုံးမှာ တစ်ရွေ့ရွေ့နဲ့ သူ့ဆီကို ဦးတည်လာနေသူတစ်ယောက်ကို နန်းလောဝ်ခမ်းတွေ့ လိုက်လေသည်…မျက်ဝန်းထဲက မျက်ရည်တွေခိုဆင်းလာပေမယ့်…ပျော်ရွှင်လို့ကျရတဲ့မျက်ရည်တွေဖြစ်သည်….သူ့ရင်ထဲ အပူတွေ ငြိမ်းချမ်းသွားကာ…လုံးစပြုနေသည့်ဗိုက်ကလေးကို ပွတ်ကာ…
သားသားမီးမီးလေးရေ ဖေကြီးပြန်လာပြီ နော် ဗိုက်ထဲကနေ မငိုနဲ့တော့ နော်….